हेर्नुहोस् आजको तपाईको भाग्य (फागुन २८ गते सोमबारको राशिफल)::Leading Nepal News
हेर्नुहोस् आजको तपाईको भाग्य (फागुन २८ गते सोमबारको राशिफल)
आज वि.सं. २०७४ साल फागुन २८ गते सोमबार, तदनुसार ई.सं.२०१८ मार्च १२ तारिख
आर्थिक पक्ष सबल बन्न्ेछ । स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । व्यापार र कामधन्धाका क्षेत्रमा खट्ने समय आएको छ । लामो दूरीको यात्राका लागि अनुकूल समय छ । दिनभरि लाभमूलक परिणाम प्राप्त हुनेछ ।
आज स्वास्थ्य र दुर्घटनाप्रति सचेत रहनुहोला । बाटो काट्दा वा सवारी साधनमा यात्रा गर्दा होस गरको जाति हुन्छ । हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको सल्लाहबाट फाइदा हुने देखिन्छ । कडा परिश्रम गर्दा राम्रो लाभ हात पर्ने सम्भावना छ ।
व्यापार व्यवसायबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने छ । बौद्धिक क्षेत्रमा समेत राम्रो छ । गरेका काममा ढिलो भए पनि उपलब्धीमूलक सफलता मिल्नेछ ।दाम्पत्य जीवनमा सकारात्मक सम्बन्ध रहने देखिन्छ ।
दैनिक कामधन्दा र बन्दव्यापार सामान्य नै रहने देखिन्छ । गरेका काममा ढिलोमात्र सफलता प्राप्त हुने योग छ । वादविवाद, मुद्दामामिला र दैनिक काममा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला । निर्णय क्षमतामा कमी आउने छ ।
आज बौद्धिक र चिन्तनमूलक काममा दिन बित्नेछ । पारिवारिक सम्बन्ध वा सन्ततिका विषयमा विवादको परिस्थिति पनि आउन सक्छ ।निराशा र वैराग्यका भावनाहरू देखा पर्नेछ । प्रेम तथा प्रणयका क्षेत्रमा राम्रो छैन । तर्कवितर्क वा विवादको स्थिति आउन सक्छ ।
सानातिना घरायसी काममा समय बिल्नेछ । प्रतिस्पर्धामा फाइदा हुँदैन ।मान्यजनसँग असमझदारी बढ्न सक्छ । तर वैदेशिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक देखिन्छ । सन्तानको बारेमा खुसीका खबर सुन्न पाइने छ । साँझपख दार्शनिक र बौद्धिक क्षेत्रमा मन जानेछ ।
कुनै कामको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ । दाजुभाइ र बन्धुवान्धवले सकेको सहयोग गर्नेछन् । बेलुका झिनामसिना घरायसी समस्याहरू देखापर्न सक्छन् । जीवनसाथीसित केहीकुरामा विवाद हुनसक्छ तर तुरुन्त समाधान हुनेछ ।
व्यवसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । आम्दानीका नयाँ बाटो खुल्नेछन् । पारिवारिक सुख मिल्नेछ ।आँटेको काममा सफलता मिल्नेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ । ठूलाबडाबाट आवश्यक सहयोग र सल्लाह प्राप्त हुनेछ ।
व्यापारबाट लाभ मिल्नेछ ।आर्थिक अवस्था सबल बन्न्ेछ । कृषि तथा कृषिजन्य व्यवसायमा संलग्नहरूका लागि लाभ लिन सकिने समय छ ।मन पर्ने वस्त्र, अलङ्कार आदि उपहार पाइने योग छ । स्वादिष्ट भोजनको अबसर प्राप्त होला । दिन रमाइलो गरी बित्नेछ ।
स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । वादविवादमा विजय प्राप्त हुनेछ । रोकिएका कामहरू पूरा हुन थाल्नेछन् । वहस र वादविवादमा विजय प्राप्त हुनेछ । परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने छ । अर्थलाभका अवसर आउने छन् । पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहने छ । मनमा हौसला जाग्नेछ ।
कर्मप्रति इमानदार र लगनशील भइने छ । निर्णयात्मक शक्ति बढ्नेछ ।रमाइलो पारिवारिक जमघट हुनसक्छ । सामाजिक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रममा संलग्न हुनुपर्नेछ ।इष्टमित्रले प्रदान गरेको सल्लाहलाई पालना गर्दा फाइदा हुने योग छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा साख रहने जोगाउन सकिनेछ । गरेका काममा सफलता पाइने छ ।कर्मचारीले हाकिमलाई खुसी पार्न सक्छन् । सन्तानपक्षबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ । धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सक्रिय भइनेछ ।ठूलाबडाको सहयोग र सल्लाहले राम्रो फाइदा लिन सकिने छ ।
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (माघ ०९ गते बुधबार )
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (माघ ०८ गते मङ्गलबार )
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (माघ ०५ गते शनिबार )
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (माघ ०४ गते शुक्रबार )
आजको तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस् राशिफल
आज तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस् आजको राशिफल !
गायक हरि ढुंगानाले ल्याए चन्चले सानी ! (भिडियो सहित)
स्वस्थानी व्रतकथा, भाग – ३ : सतीदेवीको कन्यार्थमा भगवान् विष्णु
पार्टी सभापति देउवा निवासमा काँग्रेस नेताहरुको बैठक : निश्कर्ष के निस्कियो ?
यो वर्ष एक खर्बका नोट जलाउँदै राष्ट्र बैंक !
डण्डा नदीको छेउ(बेलहिया)मा पर्यटकीय द्वार शिलान्यास !
डा.गोविन्द केसीको विरोधमा अनशन बस्ने थापा पूर्वसशस्त्र समूहका
नवलपरासीका सामुदायिक विद्यालयबीच एकीकरण
नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाको दमकल दुर्घटनामा , २७ जना घाइते
एकाबिहानै सप्तरीमा गोली चल्यो एक जनाको मृत्यु !